အားလုံးအချိန် 10 အကောင်းဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားဂေါက်သီး
အမှတ် 10 ကနေနံပါတ် 1 ငှါ, တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားကစားမှာအကြီးမြတ်ဆုံးချရေတွက်
အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးကိုအဘယ်သူဖြစ်ကြ တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား သမိုင်း? ကျနော်တို့တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားကစားဖို့အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးမဆိုလိုဘူး, ဥရောပအသင်းပြိုင်ပွဲ vs. ယူအက်စ်အေ၏ကြီးမားသောဇာတ်စင်ပေါ်တွင်လွန်ကဲသောသူတို့အားဂေါက်သီး - ကျနော်တို့ကတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှာအကောင်းဆုံးဆိုလို။ ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Picks 10 ဂေါက်သီးအတူစတင်များနှင့်အမှတ် 1 မှဆင်းရေတွက်ဖြစ်ကြ၏:
09 ၏ 09
နစ်ခ် Faldo, ရေးအဖွဲ့ဥရောပ
စတိဗ် Munday / Getty Images
ကျနော်တို့အစားကဒီမှာထားကြပြီနိုင်ကြောင်းကြီးမြတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများများများရှိပါတယ် နစ်ခ် Faldo : Bernhard Langer , Billy Casper , Lee က Trevino , Gene Littler နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထိုက်သူကိုတော်တော်များများအခြားသူတွေ။ တောင်မှလု Donald ။
သူအများဆုံးပွဲအောင်ပွဲ (23) အတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှတ်တမ်းများရရှိထားသူကွောငျ့, သူပထမဦးဆုံးဖြစ်သောကြောင့်မိမိအ 6-4-1 ဆိုရင် single မှတ်တမ်း, 1977 ခုနှစ်မှာကစားသည့်အခါသူကဥရောပဂေါက်သီး၏ကြီးစွာသောလှိုင်းကြေညာသောကွောငျ့ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အများဆုံးပွဲကစား, Faldo နှငျ့အတူကွှ (46) နှင့်အများဆုံးဖလား (11) ကစားခဲ့ပါတယ်။ မိမိအခြုံငုံကအနိုင်ဂိုးရာခိုင်နှုန်း - .543 (23-19-4) - အကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက်တို့တှငျအကောငျး၏မဟုတ်။ ဒါပေမယ့်အခါတိုင်းတက်ဖေါ်ပြခြင်းနဲ့သင့်ရဲ့အခြမ်းဘို့အချက်များထွက်ကြိတ်ဘို့ကဆိုပါတယ်ခံရဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။
09 ၏ 08
ဆာဂျီယို Garcia က, ရေးအဖွဲ့ဥရောပ
Garcia ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းတွင်နှစ်ခုတက်ကြွစွာကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး, သူသည်အကောင်းဆုံးအကြား, သူ့ကစားသမားဘစံချိန် 18-9-5 (64.1 ရာခိုင်နှုန်း) ကိုဖန်ဆင်းဆိုလိုသည်မှာ 2014 ခုနှစ် 2-1-1 သွားလေ၏။ Garcia က, အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, အနိုင်ရတဲ့ထက်ပိုမိုဆုံးရှုံးဆိုရင် single အတွက်ဒါကောင်းမွန်စွာပြုကြသေးပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူက 3-4-0 မှတိုးတက်စေရန် 2014 ခုနှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Garcia ကမီနိုင်တဲ့ဘယ်မှာ Doubles ဖြစ်ပါတယ် in: 9-2-2 foursomes နှင့် 6-3-3 ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်း ။ Garcia က 2004 ခုနှစ် 1999 ခုနှစ်ကသူ၏ပွဲဦးထွက်အတွက် 3-1-1 (သူအသက် 19 မှာအသက်အငယ်ဆုံးကစားသမားများအတွက်ဖလားစံချိန်သတ်မှတ်ထားရှိရာ) နှင့် 4-0-1 သွားလေ၏။
09 ၏ 07
အာနိုး Palmer က, ရေးအဖွဲ့ယူအက်စ်အေ
အာနိုး Palmer က (1973 ခုနှစ်တွင်ပုံ) အနီးကပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာရောက်လာသည်ပေမယ် PGA Championship ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရတာပါ။ ဒွန် Morley / Getty Images
အဲဒီမှာဒီ list အပေါ်စုံတွဲတစ်တွဲသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရှိခြင်း အာနိုး Palmer က ဒီအနိမ့်သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ရှငျဘုရငျ, ပွဲတစ်ပွဲ, အကြီးမြတ်ဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားစံချိန်အစဉ်အဆက်နံပါတ်များမှာတင်းကြပ်စွာရှာဖွေနေသောအခါသူ၏နောက်ဆုံးအသွင်အပြင်၏ထိုအချိန်ကသူအများဆုံးပွဲစဉ်ကိုအနိုင်ပေးများအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှတ်တမ်းများကျင်းပအများစုရမှတ်အကောင်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရခဲ့သည်အနိုင်ရနှင့် အတော်ကြာအခြားသူများကိုမျှဝေပေးတယ်။ 22-8-2, .719 - - အားလုံးအမေရိကန်များအကြားကစားအနည်းဆုံး 15 ပွဲနှင့်အတူ Palmer ကဆဲအကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက်စံချိန်ရှိပါတယ်။
ကောင်းသောပစ္စည်းပစ္စယ! Palmer က 1960 အစောပိုင်း 1970 ခုနှစ်တွင်ပေါ်တက်ရိုက်အဆိုပါဂရိတ်ဗြိတိန် / ဂရိတ်ဗြိတိန် & အိုင်ယာလန်အသင်းများကို (ထိုကိစ္စအဘို့, ဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်) ရိုးရှင်းစွာဘယ်နေရာမှာဒီနေ့ရဲ့ဥရောပအဆင့်နီးလျက်ရှိသောအသင်း: ဒါပေမယ့်ဒီမှာအရာပါပဲ။ Palmer ကယ့်ထူးချွန်စံချိန်ယှဉ်ပြိုင်မှုတစ်အောက်ပိုင်းအဆင့်ကိုဆန့်ကျင်ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ ဒါကဖလားဥရောပသားအပေါငျးတို့ပါဝင်သည်တိုးချဲ့မတိုင်မီပြုစုရှိသမျှသောထူးချွန်အမေရိကန်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှတ်တမ်းများများအတွက်စစ်မှန်သောပါပဲ။ Palmer ကနေဆဲ ပို. မကြာခဏသူလုပ်ခဲ့တယ်မထက်သူသည်စစ်ချီလိုက်ဖက်ခဲ့ပါတယ်ကောင်လေး (s) ကိုရိုက်နှက်ခဲ့၏။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ Palmer ကလက်ရှိတစ်ကမ္ဘာလုံး Cuppers ထက်ဝေးအားနည်းအတိုက်အခံ facing ခဲ့အကောင့်သို့ယူရှိသည်။
09 ၏ 06
ပတေရုသ Oosterhuis, ရေးအဖွဲ့ဂရိတ်ဗြိတိန် / ဂရိတ်ဗြိတိန် & အိုင်ယာလန်
ပတေရုသ Dazeley / Getty Images
Palmer က 71,9 တစ်အနိုင်ရရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်, Oosterhuis ရုံ 55,4 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပါသည်။ သို့သျောလညျးကျနော်တို့ရှေ့ဆက် Palmer က၏ Oosterhuis ရှိသည်။ ကျနော်တို့အခွံမာသီးဖြစ်ပါသလား (ထိုမဖြေပါနဲ့!) တကယ်တော့, Oostie နှင့် Arnie နှစ်ကြိမ်ဆိုရင် single အတွက်ချွတ်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်နှင့် Oosterhuis နှစ်ဦးစလုံးကြိမ်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အမှတ်ပိုပြီး: Oostie facing ခံခဲ့ရသည်အမေရိကန်အသင်းများကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ခဲ့ကြသည် - အနာဂတ်ခန်းမ-of ရေနစ်မြုပ်နှင့်ပြည့်ဝ၏အမည်စာရင်း။ တနည်းကား, ယှဉ်ပြိုင်မှုအဆင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ Oosterhuis '' 55.4 ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရစံချိန်ရှုမြင်ပုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရမည်ဖြစ်သည်။ မိမိအကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တံဆိပ်လက်မှတ်ကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအများကြီးပိုကောင်းလှပါတယ်။
Oosterhuis 14-11-3 တစ်ခုခြုံငုံစံချိန်နှင့်တကွ, စုစုပေါင်း 28 ပွဲခြောက်လတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားကစားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ထိုသို့ Oostie ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိရာဆိုရင် single အတွက်ပါပဲ။ သူကသူ့နောက်ဆုံးနှစ်ခုဖလားပွဲ (သူတို့အားဆုံးရှုံးမှုမှခဲ့ကြသည်သည်အထိဆုံးရှုံးဘဲ, ဆိုရင် single အတွက် 6-2-1 သွားလေ၏ Hubert အစိမ်းရောင် နှင့် ရေမွန် Floyd , ရေနစ်မြုပ်နှစ်ခုအနာဂတ်ခန်းမ) ။
Oostie ရဲ့ပထမခုနစ်ဆိုရင် single ပွဲများတွင်သူအာနိုး Palmer က (နှစ်ကြိမ်) ရိုက်နှက်, Gene Littler ရိုက်နှက်, Lee က Trevino ထက်ဝက်ကျဆင်းသွား, ရိုက်နှက် ဂျော်နီ Miller က JC Snead ရိုက်နှက်နှင့်ဂျယ်ရီ McGee ရိုက်နှက်။ ဒါကအံ့သြဖွယ်ဆိုရင် single စွမ်းဆောင်ရည်ပါပဲ။ (သူ့ခြုံငုံ Win-အရှုံးစံချိန် 1981 ခုနှစ်တွင်သူ၏နောက်ဆုံးဖလားအတွက် 0-3-0 ပြခြင်းဖြင့်ဆင်းဆွဲငင်ခဲ့ပါတယ်)
Oosterhuis လည်း Floyd / အဘိဓါန် Lou ဂရေဟမ်နှင့် Floyd / ဂျက် Nicklaus ရိုက်နှက်, 1977 ခုနှစ်မှာ Faldo ရဲ့ပထမဦးဆုံးဖလားအသွင်အပြင်နှစ်ခုကိုအနိုင်ပေးဖို့နစ်ခ် Faldo ပူးပေါင်း။
09 ၏ 05
(လည်စည်း) Seve Ballesteros နှင့်ဟိုဆေးမာရီယာ Olazabal, ဥရောပ
စတီဖင် Munday / Getty Images
ဟိုဆေးမာရီယာ Olazabal မှ 18-8-5 (.661) - အမှန်တကယ်နှစ်ခု၏ပိုကောင်းစံချိန်ရှိပါတယ် Seve Ballesteros '' 20-12-5 (.608) ။ ထိုအအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် - သူတို့ရဲ့စပိန် compatriot Garcia ကနဲ့တူ - မဒီလူတွေ၏ကောင်းသောဆိုရင် single စံချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ Olazabal 2-4-1, Ballesteros 2-4-2 ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားသမိုင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးမိတ်ဖက် - - ဤစာရင်းတွင်အပေါ်သူတို့ထဲကနှစ်ဦးစလုံးရရှိသွားတဲ့ကားအဘယ်သို့သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်ကတည်းကဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အတူတူသူတို့ကိုစာရင်းပြုစုသာသင့်လျော်သောပါပဲ။
Ballesteros နှင့် Olazabal အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် 15 ကြိမ်ပူးပေါင်းနှင့်နှစ်ကြိမ်သာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူတို့ကအတူတကွ 11-2-2 ခဲ့ကြသည် - စပိန် Armada, သူတို့ကဟုခေါ်ကြသည် - နှင့်၎င်းတို့၏အသင်းများအတွက် 12 မှတ်ရရှိခဲ့သည်။ အခြားတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမိတ်ဖက်ထက်ခြောက်လအချက်များထက်ပိုသောပါပဲ။
09 ၏ 04
မှ Ian Poulter, ရေးအဖွဲ့ဥရောပ
Garcia ကလိုပဲ, Poulter နေဆဲတက်ကြွစွာနဲ့ 2014 ပွဲစဉ်များတွင်ကစားဖြစ်ပါတယ်။ နှင့် 2014 ခုနှစ်တစ်ဦးဆုံးရှုံးစံချိန်နဲ့သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်: သူ 0-1-2 သွားလေ၏။
ကစားအနည်းဆုံး 15 ပွဲနှင့်အတူအားလုံးဂေါက်သီးများအတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားသမိုင်းအတွက်နေဆဲအကောင်းဆုံး - ထိုအခါသူ၏ခြုံငုံစံချိန် 12-4-2, .722 တစ်အနိုင်ရရာခိုင်နှုန်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ထိုမင်းသည်ဆိုရင် single အတွက်သူ့ကို 4-0-1 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်, 2014 ခုနှစ်ဝက်ဘ် Simpson halving ကအရှုံးအားဖြင့်မပါသောစံချိန်သည်သူ၏ဆိုရင် single ထားရှိမည်။ ယခင်ဖလားမှာတော့ Poulter ရဲ့ WL မှတ်တမ်းများ 4-1-0, 3-1-0 နဲ့ 4-0-0 ပြပါပါဝင်သည်။
09 ၏ 03
ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအံ့အားသင့်စရာပါပဲ။ ဆွေးနွေးချက်အကြီးမြတ်ဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံး Cuppers မှလှည့်သည့်အခါ, တွမ်စွန် '' s အမည်တက်လာဘူး။ သူကသူ့ရှည်လျားအောင်မြင်သောဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအစိတ်အပိုင်းအတွက်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်ရှိ၏ Ariane ထဲဘာမျှမသူ့ကို plodding နှင့်ကြိတ် (နှင့်အနိုင်ရတဲ့) ထားရှိမည်။ ဒါကြောင့်မိမိအတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားစံချိန်သတိမမူရောက်လာပါတယ်။
ဒါပေမယ့်အမေရိကန်ကမဟုတ်ပါဘူး။ စွန်ကသူ့တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် 15-9-4, 60,7 တစ်အနိုင်ရရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သည်။ အဲဒီစံချိန်ကိုခွန်အား၌ရရှိမှုခဲ့ဥရောပအသင်းများကိုဆန့်ကျင်ရေးသားပြုစုခဲ့သည်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏အမေရိကန်ပြိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်မှတဆင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
စွန်ခုနစျပါးဖလား, 28 ပွဲကစား, ဒါပေမယ့်သူကစွန်ကိုတကယ်ထွက်ရပ်ဘယ်မှာဆိုရင် single အတွက်ပါပဲ။ သူက (5-0-2) ခုနစျပါးဆိုရင် single ပွဲကစားနဲ့ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အကြောင်း, ပွဲတစ်ပွဲ, တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားသမိုင်းမှာဒုတိယအကောင်းဆုံးဆိုရင် single စံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာတခါတရံလည်းကြီးမားသောအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ 1989 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှာစွန် Howard Clark ကရိုက်နှက် 8-and-7, 18 အပေါက်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုရင် single ပွဲစဉ်အတွက်အစဉ်အဆက်အောင်ပွဲ၏အကြီးဆုံး margest အဘို့အချည်ထားလေ၏။ 1979 ခုနှစ်, စွန်နှင့်မိတ်ဖက် Hale က Irwin ကဲန်ဘရောင်းနှင့် Des စမိုက် 7-နှင့်-6 ရိုက်နှက်တစ်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား foursomes ပွဲစဉ်အတွက်အစဉ်အဆက်အောင်ပွဲ၏အကြီးဆုံးအနားသတ်အဘို့အချည်ထားလေ၏။
09 ၏ 02
Lanny Wadkins, ရေးအဖွဲ့ယူအက်စ်အေ
Lanny Wadkins 1989 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားစဉ်အတွင်းပစ်ခတ်တဲ့ chip ကိုနစ်မြုပ်ပြီးနောက်တက်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Wadkins သည်သူ၏မျိုးဆက်ရဲ့အကောင်းဆုံးအမေရိကန်တစ်ကမ္ဘာလုံး Cuppers တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဝိဒ်သည် Cannon / Getty Images
Lanny Wadkins အများအပြားအကြောင်းရင်းများဘို့ငါတို့စာရင်းတွင်အမြင့်ဆုံး-အဆင့်အမေရိကန်ဖြစ်ပါသည်: အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရာသူ့ခြုံငုံစံချိန်, သူကဥရောပခေတ်၌၎င်း, အများအားဖြင့်အလွန်ယှဉ်ပြိုင်သို့မဟုတ်အနိုင်ရခဲ့ကြသည်ဖြစ်ကြောင်းဥရောပအသင်းများကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းစံချိန်ပြုစုဆိုတဲ့အချက်ကို; သူသုံးဦးစလုံးကို formats တစ်ခုအနိုင်ရတဲ့စံချိန်ရှိခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကို။
Wadkins ဆိုရင် single အတွက် foursomes အတွက် 9-6-0, ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများအတွက် 7-3-1 နဲ့ 4-2-2 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါက 20-11-3 တစ် 63.2 ရာခိုင်နှုန်းအောင်မြင်မှုနှုန်းကိုမှတက်ကထပ်ပြောသည်။ တကယ်တော့, Wadkins (အနည်းဆုံး 15 ပွဲကစားခဲ့) တဲ့အနိုင်ရတဲ့စံချိန်နဲ့သူ့ရဲ့ခေတ်ကနေအမေရိကန်တွေကသာလက်တဆုပ်စာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Wadkins, ဥရောပသားအဘို့ Ballesteros ကဲ့သို့လညျးမိမိအသင်းဖော်များနှင့်ပရိသတ်များမှကျော်ဖိတ်စင်သောတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားရန်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုဆောင်ခဲ့၏။
09 ၏ 01
Colin Montgomery, ရေးအဖွဲ့ဥရောပ
JD ကျူးဘား / Getty Images
ဒါကညာဘက်င်: ဖြစ်သူ Colin Montgomery အစဉ်အဆက်အကြီးမြတ်ဆုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံပရိသတ်များအများကြီး (လည်းအချို့သောဥရောပပရိတ်သတ်တွေ: Monty ပင်အများအပြား Continental အတူ Polarized ကိန်းဂဏန်းခဲ့) ဒီကြောက်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်း၏ခေါင်းပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမငြင်းပယ် Montgomery ရဲ့နေရာရှိပါတယ်။
Montgomery သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားရှစ်ကြိမ်ကစား 36 ပွဲစုစုပေါင်း, သာကိုးကြိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ မိမိအခြုံငုံစံချိန် 20-9-7 (.653) ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့် foursomes အတွက် 8-3-3 အမှတ်အသားပါဝင်သည်။
တစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အ Monty shined သည်အဘယ်မှာရှိတော်မူရှစ်ဆိုရင် single ပွဲကစားများနှင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရဘယ်တော့မှမ - ယှဉ်ပြိုင်မှုသမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဆိုရင် single စံချိန်။ ခြောက်လအနိုင်ပေးနှစ်ခုရှက်, သုညကရြှုံး။ ဒါကသူကစားရန်လေးတွင်းနှင့်အတူ 4-ချဖြစ်ခြင်းပြီးနောက် 1991 ခုနှစ်, Mark Calcavecchia ဆန့်ကျင်ထွက်ညှစ်တဝက်-အချက်လည်းပါဝင်သည်; ကလီက Janzen, ကျော်အောင်ပွဲပါဝင်သည် ဘင် Crenshaw , Payne Stewart က , Scott Hoch နှင့်ဒါဝိဒ် Toms (နှစ်ကြိမ်) ။
Montomgerie 2006 မှတစ်ဆင့် 1991 ခုနှစ်ကနေတိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားကစား, သူသည်ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအတွက်ဥရောပအဘို့ကျောက်ခဲ့သည်။ သူသည်သူ၏အသင်းဖော်မှုတ်သွင်းအတိုက်အခံများ၏အရေပြားအောက်တွင်တယ် (နှင့်ဆိမျ့အတိုက်အခံပရိတ်သတ်တွေမောင်း) နှင့်ရုံမှတ်အနိုင်ရထားရှိမည်။ သူကတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှာအစဉ်အဆက်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
'' MDF '' ဂေါက်သီးရိုက်ရမှတ်၌အဘယ်အရာကိုရပ်ပါသလား?
သြဂတ်, ဂျော်ဂျီယာ, နှင့် The Masters မှရယူခြင်း
PGA Championship ပြိုင်ပွဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
1945 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: နယ်လ်ဆင်ရဲ့နာမည်ကြီး Streak ၏အောင်ပွဲခံအပိုင်း
1962 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့်: 'ဟာကေ့၏ Big ကောင်လေးသည်အထဲက' '
1999 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: Payne Stewart ကရဲ့နောက်ဆုံးဝင်း
1958 မာစတာ: အာနိုး Palmer ကတစ် Superstar စားသောက်ဆိုင်ဖွစျလာ
ဒုတိယအပညတျ: ရမည်ရုပ်တုဆင်းတု Make မ
အာအန်အေမှ DNA ကို မှစ. ကူးယူမှတ်တမ်းတင်၏ခြေလှမ်းများ
Wilbur Wright, လေကြောင်းရှေ့ဆောင်၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အားလုံးအချိန် 10 အများစုမှာအောင်မြင်သောဒစ္စနေး Blockbuster
တစ်ဦး Acrostic ဆိုတာဘာလဲ
Kastle-Meyer ဖြေရှင်းချက် Make ရန်ကဘယ်လို
လူသိနည်းသောက Black အမေရိကန်တွေ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် 101: ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
1889 မှ 1880: အာဖရိက-အမေရိကန်သမိုင်း Timeline ကို
အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံး Animated တီဗွီရှိုးပွဲများ
Suzanne Pettersen: အ LPGA စတားများ၏ဇီဝ
Pennsylvania ပြည်နယ်အဆင့်လက်ခံရေး၏အနောက် Chester တက္ကသိုလ်